Saamaynta mustaqbalka ee robotikada iyo teknoolojiyada cusub ee shaqada | Dhaqaalaha Dhaqaalaha
Saamaynta mustaqbalka ee robotikada iyo teknoolojiyada cusub ee shaqada
La qabsada isbeddelada ba'an, qallafsan iyo xagjirka ah ee tikniyoolajiyadda cusub iyo aaladaha casriga ah ku tababbaran karo aag kasta, waligeed ma sahlanaan doonto ama fududahay in la xaliyo.
Wax ka beddelka iyo saameynta ka dhalanaysa ifafaalaha noocan ah ayaa ku qarxi kara naxariis la'aan deegaan gaar ah wareerkuna wuxuu noqon karaa mid deg deg ah.
Saamaynta dhacdadan oo kale waxay awood u leedahay inay ku baahiso meelo badan oo jiritaanka aadanaha ah. Dunida shaqada (shirkadaha iyo shaqaalaha) ayaa tusaale u ah tan, isla mar ahaantaana saamaynteeda waxay saameyn ku yeelan doontaa dhaqaalaha shaqsiga iyo qoyska, sidoo kale dalalka iyo gobollada.
Shaki la'aan durba waa a ganacsiga maanta, leh awood u leh waxay saameyn ku yeelan doontaa qayb weyn oo bulshada ka mid ah berrito.
Digitation of shaqada, tikniyoolajiyad qas, robotization: Kuwani waa qaar ka mid ah ereyada la xiriira dhibaatadan taas oo milicsigu noqdo mid lama huraan ah.
Bini'aadamka, oo ah wax soo saar ka mid ah hal-abuurkiisa asalka ah, wuxuu awood u yeeshay taariikhda oo dhan inuu sameeyo boodboodyo waaweyn oo ku saabsan daahfurka iyo tikniyoolajiyadda, laakiin inta u dhexeysa boodboodyada iyo soohdimaha waa inuu qeexaa oo uu daryeelaa heerkiisa tallaabo oo faahfaahsan, maadaama ay u muuqato inuu jiro xoog badan iyo karti badan oo ku urursan natiijooyinkooda iyo horumarkooda, taas oo noqon karta boomerang aakhirka dhaawaca qoraaga.
Kaliya adoo xusaya tamarta nukliyeerka iyo dhammaan waxtarka wanaagsan iyo halaagga ay ku yeelatay meeraha, iyo inay tahay ikhtiraac bini aadam awood u leh ka faa'iideysiga; ayaa ku filan in lagu baraarujiyo taas istaraatijiyad milicsiga waa inay la socotaa horumar, si aysan u lumin ama ugu dambeyntii si xoog leh u saameyn.
Waxaan ku wajaheynaa qodobkaan cinwaan looga hadlayo teknoolojiyada cusub, aaladaha casriga ah, sirdoonka macmalka ah y saamaynta shaqada taas oo horeyba loo howlgaliyay, laakiin dhacdooyinkooda si tartiib tartiib ah loo xoojin doono sanadba sanadka ka dambeeya.
Aynu ku falanqeyno mawduuca geesaha xiisaha leh qaarkood, oo u muuqda kuwo gebo gebo gebi ahaanba iska soo horjeeda, waana awoodnaa aragno oo ka fikir sida ay noo saameyneyso, heerkee, faa iidooyin - khasaarooyin iyo haddii aan maareyno isku dheellitirnaanta waxyeellooyinkeeda togan iyo kuwa taban, ugu yaraan waxaan ka fekeray sida arrinta maanta loo wajahayo.
1 Teknolojiyadaha khalkhalka iyo shaqo abuurka
2 Teknolojiyada miyay inaga dhigi kartaa cunsuriyad
3 Qaybta teknolojiyada waxay abuuri kartaa shaqooyin
3.1 Waqtiga falcelinta iyo la qabsiga isbedelka Waqti ma na siinaysaa?
Teknolojiyadaha khalkhalka iyo shaqo abuurka
ka teknooloojiyada qalafsan, sidoo kale loo magacaabay tabo cusub oo carqaladeeya, waa teknoolojiyadda iyo hal-abuurnimadaas oo sababa wax-ka-beddello waaweyn ama yar, iyadoo u janjeera in la waayo ama la sameeyo farsamooyin, aalado iyo alaabooyin taariikhsan.
Sidan oo kale, waxaa suurtagal ah in si wax ku ool ah loola tartamo tiknoolajiyada xoogga leh daqiiqad la siiyo, si loo dhiso loona xoojiyo suuqa.
Waxyaabaha cusub ee carqaladeeya, haddii la falanqeeyo muddada gaaban, waxaa lagu doodi karaa inay jirto suuragalnimo sare oo ay dhici karto kororka shaqo la'aanta qaybaha gaarka ah. In kasta oo ay lagama maarmaan tahay in la sheego, in la tixgeliyo muddada dheer, marka ay kororto waxsoosaarka, shaqooyin ayaa la abuuri karaa.
Robotyada iyo caqliga macmalka ah ayaa saameyn ku yeelan doona bulshada iyo shaqada
Sirdoonka macmalka ah iyo robotikada ayaa noqon doona kuwa soo socda boodbooda oo bini'aadamku ku siin doono, oo kaliya lala barbardhigi karo kacdoonnadii warshadaha ee adduunka beddelay xilligaas.
Markii aan la macaamilaynay mawduuca aaladaha iyo sirdoonka macmalka ah, waxaan bilownay inaan u dhowaanno khataraha iman kara iyo xoogagga, taasi waxay la socon kartaa hal abuurka aadanaha.
Waxaa macquul ah inaan ku sii dhawaano mustaqbal bulshada dhexdeeda, shaqo qabashadeeda lafteedu macno samayn meyso inaan qiimeyno inuu qofku xaq u leeyahay inuu wax cuno iyo in kale. Waxaa la sheegay inay macquul tahay, shaqo la'aantu inay joogto ka noqoto meeraha sababahan aan soo xusnay awgood.
Forrester, shirkad cilmi baaris ku sameysa suuqa, ayaa tiri taas malaha ilaa 25 milyan oo shaqo ayaa la waayi karaa toban sano gudahood, wax soo saarka horumarka farsamada.
Markay aalado iyo sirdoon macmal ahi yimaaddaan, oo ay si dhab ah u yimaaddaan, oo ay la socdaan dhammaan xoogga iyo saamaynta ay ku yeelan doonaan dhaqaalaha, bulshada iyo shaqada; markaa ma jiri doono wax kale oo ka soo noqoshada arrimaha noocan oo kale ah, haddii aan si wanaagsan horay loogu qaban.
Inbadan waxay mustaqbalka u arkaan mustaqbal wanaagsan, oo waxay yiraahdaan ma jiri doonaan wax kale oo aan ahayn la qabsiga iyo dib-u-cusbooneysiinta tikniyoolajiyadda.
Waa wax caqli gal ah in lala wajaho dhacdooyinkan macluumaad ku filan. Si kastaba ha noqotee, sanadba sanadka ka dambeeya waxay noqon doonaan kuwo maalinle ah nolosheena noocan ah tikniyoolajiyadda, iyo hannaanka la qabsashada ayaa kori doona.
Markay isbeddeladu yimaadaan, arrimo badan oo la xiriira canshuurta, dhaqaalaha iyo shaqada. Saamaynta caqliga macmalka ah uu ku yeelan doono bulshada ayaa noqon doonta mid aad u xoogan.
Khubarada qaar waxay xaqiijinayaan in aalado-robotyada shaqooyinkooda badali maayaan. Taasi waa, looma fikiri doono ama looma qorsheyn doono ujeedkan, laakiin halkii loogu talagalay hawlo beddel ah.
Diiraddu waxay noqon doontaa inay awood u yeelato inay buuxiso shaqooyinka ama waxqabadyada soo noqnoqda ama kuwa u baahan saxnaan weyn, oo ah arrin tiknoolajiyaddu awoodi karto inay bixiso.
Khasab maahan inay xumaato, laakiin taxaddar!
Marka ay tahay digitization ku lug lahaado shaqada, heerarka waxtarka iyo wax soo saarka si aad ah ayaa loo kordhin karaa, iyo sidoo kale shaqooyinku way kordhi karaan.
Waxaa la sheegay in haddii Spain ay maalgashi ku filan tan sameyso illaa 2020, 250 shaqooyin cusub ayaa la soo saari karaa sannad kasta. Sidaas waxaa yiri CEO (Isbaanishka Ururada Ganacsi).
Khabiiro kale ayaa qaba fikirka, in qiyaasaha noocan ay aad u rajo fiican yihiin. Waxay isku raaceen inay sax tahay in hal-abuurnimada tikniyoolajiyadeed ay awood u leedahay abuurista hanti iyo shaqo, laakiin kuma jiro waqtigaas kooban.
Intaas ka sokow xitaa, waxaa jira fikrad ah inaan si sax ah u jirin jiritaanka dal farsamo iyo dijitaal badan leh waxay soo saari doontaa shaqo badan, Hadduusan ahayn caksiga.
Shirkadaha sameeya maalgashi muhiim ah digitization iyo teknoolojiyada ugu dambeysa waxay yeelan doonaan wax soo saar sare, laakiin isla markaa waxay u baahan doonaan shaqaale ka yar.
Khubaro kale waxay soo jeedinayaan in digitation-ka iyo horumarka tikniyoolajiyadda ee habka la xoojiyay aysan aheyn waxa saxda ah ee bulshada u horseedaya xaalad shaqo la’aaneed oo mar walba sii kordheysa.
Haddii waxsoosaarku kordho, waxaa jiri doona mug weyn oo caalami ah oo hanti ah, oo sidan lagu soo saarayo dalabyo cusub iyo shaqooyin kale oo ku saabsan waxqabadyo aan la mid ahayn.
Dhibaato kale ayaa jirta waxayna la xiriirtaa xaqiiqda ah in shaqooyinka xiriirka muhimka ah la leh teknoolojiyada dijitaalka ah ay u baahan doonaan a awood hal abuur leh oo ku filan oo lagu daray tababar ku filan.
Kuwa aan ku lug lahayn tikniyoolajiyadda noocan ah waxay u baahan doonaan waqti cayiman si ay u awoodaan inay u adeegsadaan. Horumarkaani waa inuu la socdaa shaqada bulshada iyo maalgashi xoogan oo muwaadiniinta ah.
¿Teknolojiyada miyay inaga dhigi kartaa cunsuriyad
Japan waa waddan si dhab ah u casriyeysan iyo bulsho xagga farsamada ah. Waxay sifiican ula xiriiraan aaladaha aaladaha warshadooda marka loo fiiriyo soogalootiga shaqooyinka u tartamaya. Tani ma cunsuriyad baa? … Hadhsan tahay in la arko.
Falanqeyntu waxay noqoneysaa mid cakiran markii qiimaha sare ee tikniyoolajiyadda iyo dhammaan hal-abuurnimada la xiriirta ee qaabkan ay u siiso alaabooyinka si fiican loo falanqeeyo, taasoo u oggolaaneysa tayada iyo kala-duwanaanta heer sare.
Qaybta teknolojiyada waxay abuuri kartaa shaqooyin
Maahan dad takhasus gaar ah leh oo ku doodaya in dhibaatooyinka shaqaalaynta iyo deegaankeeda, ay iyagu abuuraan isbadalo markasta lagu fuliyo xaalado kala duwan. Dhinac shaqooyinku waxay u dhacaan dhibaatooyin ka jira dalal kala duwan, laakiin isla markaa waxaa jira shaqo abuur taasi hore uma jirin.
Tiknoolajiyadda iyo qaybta R + D + i (cilmi baarista, horumarka iyo hal-abuurnimada) waxay leedahay awood weyn oo lagu abuuri karo shaqooyin. Si waddan uu ugu horumaro oo uu ugu sameeyo si xawli ah, wuxuu u baahan yahay inuu soo saaro aqoon cilmiyaysan iyo tiknoolajiyadeed, sida shirkadaha ay si xoog leh ugu saadaaliyaan R + D + i. Isbadalka dhijitaalka ah wax badan ayaa laga qaban doonaa.
Dhammaan dadaallada ay waddamadu sameeyaan si kor loogu qaado tiknoolajiyadda iyo maalgashiga hal-abuurnimada iyo horumarka, waxay u roonaan doontaa abuurista shaqooyin. Tusaale ahaan kuwa laxiriira cilmiga bayoolajiyada, ICT (macluumaadka iyo teknolojiyada isgaarsiinta) iyo ganacsiga elektaroonigga ah.
Isbaanishka, Horaa loo yidhi khabiiro ayaa qaybta tikniyoolajiyadda waxay noqon doontaa mid ka mid ah kuwa abuuri doona shaqooyinka ugu badan muddada gaaban.
Waqtiga falcelinta iyo la qabsiga isbedelka Waqti ma na siinaysaa?
Wadamada aduunku waxay soo mareen shaqo baabi'in waqtiyo cayiman taariikhdooda. Dhaqaalaha adduunka waxaa soo maray kala guur xagjirnimo ah sida uu ahaa dhaq-dhaqaaqa ka imanaya dhaqaalaha miyiga una sii gudbayo kan Warshadaha.
Tusaale ahaan USA, dhacdadan waxaa lagu arkay muddadii (1870-1970) oo qaadatay 100 sano. Waqtigaas waxay ku libdhay agagaarka 90 boqolkiiba shaqooyinka ka yimid miyiga.
Isla waddankan iyo muddadii u dhexaysay 1950 - 2010, iyadoo ay sabab u tahay horumarka tikniyoolajiyadda, qiyaastii 75% shaqooyinka warshadaha.
Mid ka mid ah cawaaqibyada loo arkay inay si toos ah ula xiriirto ifafaalahan ayaa ahaa soo bixitaanka "dhaqaalaha adeegga". Xitaa markaa, shaqooyinka ugu badan waxay ka yimaadeen waaxda adeegga ee kama imaan qaybta wax soo saarka.
Xaalkayagu maanta wuxuu noqdaa mid sii murugsan, maxaa yeelay mudadaas dheer ee laqabsashada noocaas ahi macquul ma aha sida midka lagu tiriyey tusaalooyinka la soo sheegay, 60 ama 100 sano.
Waxay noqon doontaa lagama maarmaan in la awoodo la jaan qaado 10 ama 15, haddii kale waxaan isku arki karnaa dhibaato weyn, oo suuragal ah inaan wajahno dhibaatada shaqo la'aanta ugu weyn waqtiga oo dhan.
Waxaan aragnay in fikradaha oo dhami aysan isku mid ahayn, in dhibaatadu aysan ahayn wax fudud, iyo in meeraha iyo bulshaduba ay ku socdaan waddo ku aaddan ifafaalahan, horeyba looga fikiray lama huraan.
Awoodda bulshada iyo siyaasadda, oo lagu daray meheradda ganacsiga, waa in la isku duwo u boodiddani inay ahaato mid isku xidhan iyo saamaynta shaqada waa la yareeyay, maaraynta la qabsiga isbedelka imanaya, sida ugufiican uguna caqli badan uguna macquulsan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Dhaqaalaha guud » Shaqada » Saamaynta mustaqbalka ee robotikada iyo teknoolojiyada cusub ee shaqada
Maxaa laga sameeyaa sixitaanka suurtagalka ah ee 2018?
Mustaqbalka bitcoins: bedel kale oo maalgashi